Radio Don Bosco - Misy lesoka ny fanentanana ny tantsaha
Misy lesoka ny fanentanana ny tantsaha
Lesoka lehibe ho an'ny fivoaran'ny famokarana eny ambanivohitra ny tsy fahampian'ny teknisiana manoro lalana azy ireo momba ny haitaom-pamokarana. Antony nahatonga ny fikambanana Lanja Miakatra manofana ireo tantsaha any amin'ny faritra misy azy ireo.
Efa niresaka ireo fivoarana misy niainga tamin'ny fikarohana sy fanatsaràna nataony momba ny zezika kankana i Papa Bio. Mbola tsy afa-po nefa izy fa misy indray ny hevi-baovao sy tombotsoa amin'ny fampiasàna ny zezika Kankana. Ny Zezika kankana hoy Andriamatoa Ranaivoarison Basile dia miady amin'ny bibikely manimba voly ka miantoka ny fitomboan'ny vokatra. Mahatohitra ny fanala any amin'ny faritra tena mangatsiaka ihany koa ankohatra izay ny fampiasana ny zezika kankana.
Izany rehetra izany hoy Papa Bio dia tokony ho fantatry ny tantsaha saingy olana eto amin'ny firenena ny tsy fahampian'ny teknisiana mizara izany. Antony mahatonga ny fikambanana Lanja Miakatra mizara traik'efa sy fahalalana ho an'ireo mponina eny ambanivohitra. Tsy misy afatsy ny fampiasàna ny haitao ara-biolojika mantsy ny antoka hampiroborobo ny fiharian'ny tantsaha eto Madagasikara.
Miombon-kevitra amin'izany koa Andriamatoa Rakoto Jean Pierre, mpanabe ary mpisehatra momba ny fampandrosoana. Izy izay efa nanoratra boky maro momba ny hirika ahatongavana amin'ny fivoarana.